Somaliland: 31 Iskuul Ayay Duufaanta Sagar Dumisay – Goobjoog News
Wararka ka imaanaya Somaliland ayaa sheegaya in duufaanta Sagar dumisay 31 Iskuul oo ku yaallay deegaannada Somaliland.
Waxaa la tilmaamay in ay tahay markii koowaad oo khasaare intaas le’eg uu soo gaadho goobaha waxbarashada tan iyo 1991-kii.
Maalmihii ugu dambeeyay waxaa ka jiray deegaannada Somaliland duufaanno roob watay kuwaasi oo geystay khasaare is kugu jira naf iyo maal.
Inta la xaqiijiyey waxaa ku dhintay duufaannadaas 25 qof,halka 27 kalana la la’yahay roobabkii duufaanta watay ee maalmihii u dambeeyay ka da’ayay deegaanada xeebta sida lagu sheegay war kasoo baxay madaxtooyada Somaliland.
Sidoo kale, 167,250 (Boqol lixdan iyo todoba kun laba boqol iyo konton) qoys ayay saameeyeen roobabkii duufaannada watay ee maalmihii u dambeeyay ka da’ayay xeebaha Somaliland gaar ahaan deegaannada Saaxil, Salel, Awdal iyo Sanaag.
Qarax Ka Dhacay Baghdad Oo Khasaare Geystay